कस्तो निष्ठुरी दैव ! कलिलै उमेरमा दिपेनलार्इ सदाको लागि चुँडी लग्यो - Everest Dainik - News from Nepal
कस्तो निष्ठुरी दैव ! कलिलै उमेरमा दिपेनलार्इ सदाको लागि चुँडी लग्यो
कार्तिक ३० । नेपालकै सबैभन्दा होचा नेपाली हाँस्यटेलिश्रृंखलाका कलाकार दिपेन शाहको निधन भएको छ ।
आज बिहीबार बिहान ७ः१५ बजे १९ वर्षे दिपेनको निधन भएको हो । हाँस्य टेलिश्रृंखला ‘झ्याइकुटी झ्याईं’ मा निर्वाह गरेको दिपेन सरको भूमिकाले उनलाई चर्चामा पुर्‍याएको थियो । उनले विभिन्न चलचित्रमा समेत अभिनय गरेका थिए ।
नेपालकै होचा कलाकारको रुपमा परिचय बनाएका शाह केही वर्षयता बोनम्यारोको क्यान्सर रोगबाट पीडित थिए । उनको उचाई ३१ इञ्च थियो ।
धादिङ घर भएका उनी केही वर्षयता परिवारसहित काठमाडौंमा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका थिए । शाहका दुई दिदी सर्जुना र सुजता र एक दाजु दिपेश छन् ।
ट्याग्स: Dipen Shah